Preyah ၏အခွက်တဆယ် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ဤစာစောင်တွင်ကျွန်တော်တစ်ဦး, ချစ်စရာကောင်းအလွန်ထက်မြက်ပြီးအလွန်စိတ်အားထက်သန်ငယ်ရွယ်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရုံစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမဟာရှိပြီးသား4အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီဒီယိုကဆိုရင် single တစ်ခုပြိုလဲဆုံးရှုံးမှုကဲ့သို့ပရိတ်သတ်တွေကြီးထွားလာအရေအတွက်ဝါကြွားနိုင်ပါ။ , အပြုသဘောပြုံးနေပေမယ့်လည်းအလွန်အမင်း exuberant ...
ငါတို့သည်သင်တို့မှ Preyah Osasey မိတ်ဆက်ကြသည်။
Preyah, Hello! သင်မည်သို့ကျနော်တို့ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာပါဘူးဘယ်မှာသင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား, အဘယ်သို့သောအ, ရှိပါသလဲ
မင်္ဂလာပါ ကျွန်မအံ့သြဖွယ်ခံစားမိ, သင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
"အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သောအရပ်တို့ကိုမ" သင်၏ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတည်း၏နာမတော်သည်။ ဒီယခုအချိန်အထိအများဆုံးရင့်ကျက်သောသီချင်းသည်နှင့်သင်ဤဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကို၏အင်္ဂါရပ်များထင်ရှားပြီလော
"အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သောအရပ်တို့ကိုမ" တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ္တုတွင်းမဟုတ်သောအရာတခုစိတ်လှုပ်ရှားမှု, တငျပွဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာနေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုထက်ဟာတိုက်ရိုက်ပါဝင်သူဖြစ်၏။ ငါအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ပြုကြပြီမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဂျနီဖာ Niven အားဖြင့်အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ် "အားလုံးအဆိုပါတောက်ပနေရာများ" ၏ပထမဦးဆုံးမိတ္တူတ္ထုတစ်ခုတေးသံဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုရန်အဆိုပြုချက်ကိုဖြင့်လိုက်ပါသွား - တစ်ခုတည်းသော၏ဇာတ်လမ်းလက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ငါပျော်မွေ့နှင့်အတူလက်ခံခဲ့သည်သည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဆိုပြုချက်ကို, ဖြစ်ခဲ့သည်။ စာအုပ်ကအရမ်းရောနှောခံစားချက်တွေကိုနှင့်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်အဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာငါကချဉ်းကပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိခဲ့ပါ။
ငါက retell မှမလိုချင်ဖို့သေချာပါခဲ့ပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘဲအချို့သောလမ်းအတွက်ငါဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျန်ရစ်ခဲ့သောနှင့်အတူစိတ်ခံစားမှု, ဖော်ပြချင်တယ်။ ဒါဟာသီချင်းစာသားထဲမှာ crystallized သည်ဤစိတ်ခံစားမှုရှိသည်ဖို့အချိန်ကိုယူ။
သင့်ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေဿုံကောင်းစွာသိသည်အတိုင်း Preyah, သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့သီချင်းတွေကို၏သီချင်းစာသား၏ရေးသားသူဖြစ်ကြသည်။ ငါဘယ်လောက်ရှည်လျားသင်ဘယ်မှာလှုံ့ဆော်မှုအများဆုံးမကြာခဏသင်ဒဏ်ခတ်ပါဘူး, ရေးသားခြင်းပြီတွေးမိ?
ငါ shool မိန်းကလေးအဖြစ်ငါနောက်ဆုံးကျောင်းကနေ့ကဆင်နွှဲငါ့ဆရာများအတွက်ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်အခါ, ငါ, ငါ၌ထိုကဲ့သို့သောစိတျထှကျတွေ့ရှိခဲ့ထင်ပါတယ်။
ငါထို့နောက်ငါအလွန်ကကြိုက်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းရယ်သည့်အခါလှုံ့ဆော်မှုအများဆုံးမကြာခဏငါ့ကိုရိုက်, ငါမြို့ပြဆူညံအပြင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသည်မှန်လျှင်, လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကြိမ်တိုင်တိုင်သိသိသာသာများပြား။ စာအုပ်တွေအများကြီးကျွန်မဖတ်ပြီးပါပြီ, ငါ့စိတ်ခံစားမှုမိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲပြီ။
ပိုပြီးတိုက်ရိုက်တူရိယာနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်မရ, တစ်ဦးထက်ပိုသောကြမ်းတမ်းပင်စမ်းသပ်ပေါ့ပ်သံကို - စီမံကိန်းစတူဒီယိုတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဖြစ်ကောင်းသင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂီတဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့်အတွက်အခြားဦးတည်ချက်အချက်ပြ။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုကြံစည်ကြနှင့်သင်အသစ်သောသီချင်းကိုတစ်ခုစိတ်ကူးရှိသနည်း
ဒီစီးရီး၏အယူအဆအသံဆိုလို။ ဒါဟာငါ့အကိုအပိုင်းပိုင်းကျန်နေသေးရှိသည်ဖို့ငါ့ထံသို့အလွန်သာယာသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်ပြီးသားအသစ်သောသီချင်းကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်နေကြနဲ့ကျွန်မဘယ်သူမှမျှော်လင့်အတိအကျအဘယ်အရာကိုမြော်နိုင်ကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။
ငါသည်သင်တို့ကိုကလေးတစ်ဦးသောအခါ, သင်ကျောင်း choir ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ကြသည် ဖြစ်. , ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သို့သော်အချို့ကိုသင်တူရိယာ (စန္ဒရားသို့မဟုတ်ဂစ်တာ) ကစားဘူး, သင်ကိုလည်းဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ဂီတပညာရှင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြံစည်ကြသနည်း
ကျွန်မကလေးတစ်ဦးအခါနောက်တဖန်, ငါသည်နောက်ပိုင်းတွင်စန္ဒယား မှလွဲ. ငါ့အဘို့လက်ျာမြားကိုမဖွစျဖို့သက်သေပြသည်ဟုအများအပြားတူရိယာမှမျှော်မှန်းချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါသင်ခန်းစာတွေကို ယူ. သော်လည်းငါ့မိခင်ကျွန်မကြောင့်နားလည်မှုလွဲများ၏, ငါ့သဘောတူညီချက်မပါဘဲသို့မဟုတ်ပင်ငါ့ကိုမှာအားလုံး သိ. အခြင်းမရှိဘဲ, နောက်တဖန်မသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်လူကြီးများအရာအားလုံးကိုသိသောကြောင့်, နှင့်ကလေးများ "နားမလည်ဘူး") သောဆရာကိုပြောသည်နှင့် လပေါင်းများစွာအကြာငါနဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီကိုသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဝေးမြင်ရပါလိမ့်မယ် ...
ယခုသင်4တစ်ကိုယ်တော်ဗီဒီယိုကဆိုရင် single ရာ၌ခန့်ထားပြီတစ်နှစ်ကျော်ကအနည်းငယ်အဘို့အ Preyah ။ ဤဂီတအပိုငျးပိုငျးတစျခုစီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်, ကိုယ်ကမခေါ်လိမ့်မယ်, လူမှုရေးသတင်းစကားရှိပါတယ်။ အနားမှာသင်၏သီချင်းများမှတဆင့်သင်ကိုယ်တိုင်လူမှုရေးပဏာမ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူးနှင့်သင်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အဘယျသို့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုထောကျပံ့မညျလော
အတိအကျ! ငါ့အဘို့အများပြည်သူပုံဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးအကျိုးအတွက်လူမျိုး၏အကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် - တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောမက်ဆေ့ခ်ျ။
ငါ့အဘို့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအစွမ်းထက်အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှုကြောင့်မပါဘဲဖြစ်နိုင်လျှင်ပင်, ကတိုတောင်းတဲ့ကြာချိန်၏လိမ့်မည်။ ငါကအတော်လေးအသုံးဝင်အရည်အသွေးထင်နှင့်ပျက်ကွက်လျှင်, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုပိုကြီးပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်။ 🙂
Youtube ကိုအပေါ် Preyah
Facebook ပေါ်မှာ Preyah
ဂီတ, ပင်ကိုယ်ဉာဏ် | | rating:5/ 30